Blogs: अण्डा कति खाने ? कसरी खाने??
अण्डा कति खाने ? कसरी खाने??
दसैंमा खानपान कसरी स्वस्थ राख्ने??
२०७४-दसैं पनि आयो । दसैंतिहारजस्ता ठूला चाडबाडको नाम सुन्नासाथ प्राय: सबैलाई साथीभाइसँगको रमझम, पुख्र्यौली थलोको यात्रा, भेटघाट, अरू रामरमाइलोको झल्को आइहाल्छ । अरू ठूला पर्वजस्तै दसैं हाम्रा लागि स्वादिलो, गरिष्ठ, मसलादार, बोसो, चिल्लो खानपानमा रमाउने समय पनि हो । सामान्य स्वस्थ व्यक्तिले स्वच्छ र सन्तुलित मात्रामा यस्तो खानपान लिए खासै फरक पार्दैन । तर बालबालिका, बूढापाका र नसर्ने रोग भएकाहरूले भने सचेत हुनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिका लागि भने यस्तो असन्तुलित काम जोखिमपूर्ण हुन्छ । कहिलेकाहीं त ज्यानै जोखिममा पर्नेसम्म हुन सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार, केही...
कुन रोग लाग्दा कस्ता फलफूल खाने ?
आजकालका मानिसहरुलाई थुप्रै प्रकारको रोगले घेरेको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थाइराइडजस्ता रोग ४० कटेका मानिसहरुबिच सामान्य जस्तै भइसकेको छ । नेपालीहरुको खाने तरिका अलि भिन्न छ । दाल, भात, तरकारी खाँदा शरिरलाई चाहिने सबै पौष्टिक तत्वको परिपूर्ती हुन्छ भन्ने मान्यता अहिलेसम्म नै कायम छ । धेरैजसो नेपालीहरुमा फलफूल खाने बानीको विकास भइसकेको छैन । धेरैजसो मानिसहरुले फलफूललाई चाडबाडको बेलामा मात्र खाने गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ, कस्तो रोग लागेका व्यक्तिले कस्तो फलफूल खानुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदा पनि मानिसहरुले कुनै पनि फलफूल नखाने गरेको पाइएको छ । एक त फलफूल...
विज्ञापनले बिगार्‍यो बानी: ‘कर्नफ्लेक्स’ हैन मकै-भटमास खाउँ !!
टेलिभिजन च्यानलहरुमा दिनहुँ विभिन्न सप्लिमेन्ट, टनीक र डिब्बा बन्द ‘पौष्टीक पदार्थ’हरुका विज्ञापन प्रशारण भइरहेका हुन्छन्। कतिपय विज्ञापनमा कुनै सेलीब्रेटीबाट भन्न लगाइएको हुन्छ, ‘५० बर्षपछि घरको खानाले तपाईलाई पोषण पुग्दैन । तपाईले बाहिरको प्रोटिन, भिटामिन, सुक्ष्म तत्व भएको खाना खानुपर्छ । पौष्टिकताले भरपुर यो चिज खानुस्, तपाईको माइसपेशी र हड्डी बलियो बन्छ ।’ विज्ञापनले औँल्याएको प्याकेट, सिसी या डिब्बावाल खाना खाएपछि बच्चाले फुटबलमा गोल गरेको, पढाईमा फर्स्ट ल्याएको या बृद्ध-वृद्धा तन्दुरुस्त र भएको देखाउन खोजिएको हुन्छ । त्यस्ता विज्ञापन...
मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट बच्न खाने गरौं यी ५ चिज!
मधुमेहले धेरैलाई सताएको छ । यसलाई हामी खानदानी रोग पनि भन्छौं । खासगरी सौखिन जीवनशैली रोज्नेहरु मधुमेहको चपेटामा पर्छन् । मधुमेहबाट बच्नका लागि खानपानमा सर्तक रहनुपर्छ । सक्रिय जीवनशैली विताउनुपर्छ । मधुमेह जस्तै उच्च रक्तचाप, मुटुरोग पनि अहिले खानदानी रोगको रुपमा देखापरेको छ । यस्ता रोगहरुबाट बच्नका लागि स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउनुपर्छ । साथै खानपानमा सावधानी अपनाउनुपर्छ । यस्ता अनेक रोगबाट बच्नका लागि हामीलाई म्याग्नेसियमयुक्त खानेकुराको खाँचो हुन्छ । किन म्याग्नेसियम ? हाम्रो शरीरलाई सँधै स्वस्थ र सक्रिय बनाइराख्न आवश्यक मिनरल्समध्ये एक हो...